KABARIN’ NY PERE PEDRO FAHATONGAVAN’NY POLISY ETO AKAMASOA ANDRALANITRA | Akamasoa
KABARIN’ NY PERE PEDRO FAHATONGAVAN’NY POLISY ETO AKAMASOA ANDRALANITRA
ANDRIAMATOA MINISITRY NY POLISY RANDRIANARISON FANOMEZANTSOA RODELLYS !
Andro lehibe ho an’ ity faritra Andralanitra ity androany dia ny fahatongavanao Andriamatoa Minisitra, miaraka amin’ny mpiara-miasa aminao, izay manana andraikitra lehibe amin’ny Filaminam- bahoaka .
Efa 31 taona izahay izao, niady amin’ny fahantrana eto amin’ ity faritra malaza sahirana be ity, izay lasa Tanàna mahate-hotia sy madio ankehitriny no ahitanareo azy .
Asan’ Andriamanitra izany , ary ireo Ray aman-dreny tia zanaka , tia ny marina, tia fandrosoana, tia soa iombonana no monina ato.
Nefa misy ihany koa ireo olona tsy maty manota, na ireo olona tsy miraharaha na inona na inona anatin’ ny fiarahamonina. Ireo olona ireo dia 10 isan-jaton’ ny mponina eto Andralanitra ankehitriny ary te hanjakazaka amin’ny ireo olona marina sy tia fandrosoana.
Sarotra amiko ny milaza fa faly amin’ny fahatongavan’ny Polisy amin’ ity Tanàna ity, kanefa noho ny mbola misy olona ratsy ato, tsy tia namana , tsy tia fihavanana , tsy tia fandrosona ka mandrava ny fiaraha-monina, dia faly mandray anareo izahay.
Anatrehan’ izany dia tsy maintsy nanao antso avo tamin’i President- ny Repoblika aho, hanampy anay mba tsy ho rava ity asa natombok’ Andriamanitra ity. Hamerina ny hasina sy ny zo maha-olona amin ’ity faritra Andralanitra ity, izay nijaly dia nijaly tamin’ ny andro taloha, nefa ankehitriny izao mandroso, saingy indrisy anefa fa misy ihany ireo olona sy tanora vitsivitsy tsy miraharaha ny fiarahamonina ka mampisy disadisa sy fisaraham-bazana.
Koa anatrehan’ izany dia mandray ny Mpitandro Filaminana izahay mba hampiova ireo olona tsy tia soa iombonana sy mandrava ny Tanidrazana ireo. Satria ireo olona ireo dia mivarotra rongony izay mampisy herisetra mihoa-pampana amin’ny tokantrano , amin’ny vadiny sy ny zanany sy ny fiaraha-monina .
Ankoatr’izany koa dia ny fanolanana ny ankizivavy , ka mitady hanao “arrangement fotsiny”. Tsy ekena izany na oviana na oviana raha mbola mijoro ny Hetsika AKAMASOA amin’ity Andralanitra ity. Ny zon’ ny ankizy sy ny vehivavy dia arovana hatramin’ny farany .
Ao koa ny Toaka mahery amidy eran’ ny tanàna ka mahamamo sy mampiady olona, nefa ireo mpivarotra dia tsy taitra amin’ izany vokatra ratsy izany . Fa ny vola no nataony ambony sy lolohaviny, toy izay ny soatoavina sy ny fitiava- namana ary ny soa iombonana . Tsy mampaninona azy raha maty avy eo ilay olona na manao herisetra ao an-tokantrano.
Anatrehan’ izany dia izahay ato amin’ny Akamasoa amin’ny alalan’ ny Fianarana , Fanabeazana sy ny Fivavahana ary ny Fanatanjahan-tena dia manao izay tratrin’ ny ainay mba ho vonjena ny ankizy sy tanora maro an’isa mba hianatra , mijoro ho maotina sy manaja ny soatoavina Malagasy ary mitsangana ho olo-marina anatin’ ny fiarahamonina . Betsaka ireo tanora tsy menatra ary tsy matahotra intsony mijoro amin’ izany fahamarinana ankasahiana izany.
Nefa noho ireo olona ratsy ireo manao herisetra dia voatery miantso anareo Polisy mba hanampy an’ny Ray aman-dReny sy ny Vahoaka te hiasa am-pilaminana ary te hampandroso ny ankohonana sy ny zanaka .
Izahay eto dia manao fanentanana matetika, indrindra amin’ny alalan’ ny fivorian’ ny arivo lahy , nefa izay tapaka androany dia adino rahampitso. Dia manjary omaly tsy miova ny zavatra rehetra.
Eto anatrehanao, Mr Le Ministre, dia milaza izahay fa tongasoa miara miasa amin’ny Vahoaka amin’ny ity faritra Andralanitra ity ianareo Mpitandro Filaminana .
Enga anie ny Polisy miasa eto mba ho marina sy mahafoitena amim- pahamarinana. Efa niaraniasa tamin’ny Polisy izahay teo aloha ka avy eo dia tsy nitohy ny asa , satria tsy nisy vokatra sy fiovana firy .
Ankehitriny manana President vaovao, mavitrika sy marina, ary tia ny fandrosoana , ka noho izany dia manantena izahay fa hiara miasa isika hanadio ny Tanàna amin ‘ireo olona tsy maty manota, mamono sy manimba ary mandrava ny fiaraha- monina.
Ny mahazatra anay ato amin’ny Akamasoa , dia milaza ny marina mivantana fa tsy ankolaka , ary eto aminay ny teny filamatra dia ” Asa fa tsy kabary “ , ao koa ny teny hafa manankery eto dia “ Izay tsy miasa aoka tsy hihinana” ary “Tolona sy Fivavahana”.
Misaotra an’ny President ny Repoblika ANDRY RAJOELINA tia sy manampy ny vahoaka madinika.
Misaotra anao Mr Le Ministre de la Sécurité Publique , sy ny mpiara miasa aminao tonga marobe manambara izao finiavana lehibe izao, fa hiaro ny tanàna sy ny vahoakan ’ Andralanitra izay nijaly hatramin’ izay ka hatramin’ izao . Ka io fijaliana io nahavery ny fanahin’ ny sasany ka latsaka anatin’ ny zava mahadomelina : toaka , rongony, fanolanana, famonoana vady sy zanaka, rendra rendra isan- karazany, halatra sy herisetra tsy azo lazaina.
Mino izahay fa amin’ny Herin’ny Fahendren’ Andriamanitra sy ny fahavononan’ ny Polisy sy ny Vahoaka ato amin’ny faritra Andralanitra dia hiova ho marina sy ho tsara kokoa ity Tanàna mahatehotia ity .
“Tsy misy mafy tsy laitry ny zoto “ ary “ Ny marina tsy mba maty “!
Andralanitra, faha 12 may 2020